Biyaha oo loo beddelo khamri, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Biyaha oo loo beddelo khamri
Injiilka Yooxanaa wuxuu sheegayaa sheeko xiisa leh oo ka dhacday bilowgii howlihii Ciise ee dunidaa: wuxuu aadey aroos halkaas oo uu biyo u beddelay khamri. Sheekadani waa wax aan caadi aheyn dhinacyo badan: waxa halkaas ka dhacay waxay umuuqataa mucjiso yar, oo aad uga sii badan khiyaano sixir ah marka loo eego shaqada Masiixa. In kasta oo ay ka hortagtay xaalad wax laga xishoodo, haddana kama aysan hadlin dhibaatada aadanaha sida tooska ah ee bogsashada uu Ciise sameeyay. Waxay ahayd mucjiso lagu sameeyay wareegtooyin gaar loo leeyahay oo dhacay iyada oo aan la ogayn ka faa'iideystaha dhabta ah - si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd calaamad muujinaysa ammaanta Ciise (Yooxanaa 2,11).
Shaqada suugaaneed ee sheekadani waa xoogaa wareersan. Yooxanaa aad buu uga ogaa inbadan oo mucjisooyinka Ciise ka badan intuu ka fikiri karay qoraalladiisa, laakiin wuxuu taas u xushay bilowgiisii ​​injiilkiisa. Intee in le'eg ayay u adeegtaa ujeeddada Yooxanaa inuu naga dhaadhiciyo inuu Ciise yahay Masiixa (Yooxanaa 20,30: 31)? Intee in le'eg ayay muujineysaa inuu isagu yahay Masiixa oo uusan ahayn (sida Talmud Yuhuuddu markii dambe sheegatay) sixir?
Bal aan hadda si dhow u eegno taariikhda. Waxay ku bilaabmaysaa aroos Kaana, oo ah tuulo yar oo ku taal Galili. Goobtu uma muuqato inay wax badan muhimsan tahay - halkii xaqiiqda ahayd inay ahayd aroos. Ciise calaamadkiisii ​​ugu horreeyay ayuu noqday Masiixa markay ahayd arooska.
Aroosyadu waxay ahaayeen ciidaha ugu weyn uguna muhiimsan ee Yuhuudda - xafladaha usbuucyada-usbuuclaha ah waxay muujinayeen xaalada bulsheed ee qoyska cusub ee bulshada dhexdeeda. Aroosyadu waxay ahaayeen dabbaaldegyo farxadeed oo mid ka mid ah had iyo jeer uu kahadli karo tusaale ahaan xafladaha arooska haddii mid doonayay inuu sharraxo barakada da’da Masiixa. Ciise qudhiisa ayaa u adeegsaday muuqaalkan si uu ugu sharaxo boqortooyada Ilaah qaar ka mid ah sheekooyinkiisa.
Had iyo jeer wuxuu ku shaqeeyay mucjisooyin nolosha adduunka si uu u caddeeyo runta runta ah. Wuxuu dadka bogsiiyey si ay u muujiyaan inuu leeyahay awood uu cafiyo dembiyada. Wuxuu habaaray geed berde ah oo calaamad u ah xukunka soo socda ee Ilaah oo macbudka dhib ku haysa. Wuxuu bogsiiyey sabtida si uu u muujiyo muhiimadiisa ku aaddan ciida. Isaga kuwii dhintay ayuu sara kiciyey si uu u muujiyo inuu yahay sarakicidda iyo nolosha. Kumanaan kun buu quudiyay si ay hoosta uga xariiqaan inuu isagu yahay cuntada nolosha. Mucjisooyinka aan eegeynay, wuxuu siiyay barako badnaan xaflad aroos si uu u muujiyo inuu yahay kan udiyaari doona masiixa boqortooyada Ilaah.
Khamrkii wuu dhammaaday Maryanna waxay u sheegtay Ciise, markaasaa ku yidhi iyadii: ... maxaan aniga ku sameeyaa? (V. 4, Kitaabka Zurich). Si kale haddii loo dhigo, maxaan ku sameeyaa? Saacaddaydu weli ma iman. Oo xitaa markii aan waqtigu ku jirin, Ciise ayaa ficlay. Markan John wuxuu farta ku fiiqay in Ciise uu waxoogaa ka horreeyo waqtigiisa waxa uu sameeyo. Cashada Masiixu weli ma imaan, laakiin ciisena weli wuu shaqeeyay. Da'da masiixu wuxuu bilaabey waqti dheer kahor intuusan noqonin mid kaamil ah. Maryan waxay filaysay inuu Ciise wax qabto; maxaa yeelay, iyadu waxay amar ku siisay addoommada inay sameeyaan wax alla wixii uu ku amray inay sameeyaan. Annagu garan mayno bal inay ka fikiraysay mucjiso ama ay u weecday suuqii khamriga ee u dhow.
Biyaha loo isticmaalo dhaqidda caadooyinka ayaa noqda khamri
Hadda waxay ahayd kiiska in lix haamood oo biyo dhagax ah oo u dhawaa, kuwaas oo ka duwanaa kaftanka biyaha caadiga ah. Yooxanaa wuxuu noo sheegayaa in kuwani ay yihiin weelasha ay Yuhuuddu u isticmaalaan wasakhda dhaqameed. (Caadiyan nadaafadooda, waxay ka doorbidaan biyo weel dhagaxa ah halkii ay ka isticmaali lahaayeen weelasha dhoobada ah haddii kale la isticmaalo. Biyo aad u fara badan oo loogu talagalay dharka dhaqda. Arooskan Cana waa inuu ahaa mid si weyn loogu dabaaldegay!
Qaybtan taariikhdu waxay u muuqataa inay ahmiyad weyn leedahay - Ciise wuxuu udambeeyay inuu u rogo biyo loogu talagalay in dhaqamada Yuhuudda lagu dhaqo khamri. Tani waxay astaan ​​u ahayd isbeddel ku yimid diinta Yuhuudda; xitaa waxaa loo barbardhigi karaa samaynta maydhashada caado. Bal ka fikir waxa dhici lahaa haddii martidu ay mar kale jeclaan lahaayeen inay gacmahooda mar kale maydhaan - waxay aadi lahaayeen dheryihii biyaha oo midkastaaba wuxuu ka buuxsamay khamri! Biyo kuma heli laheyn xafladeeda. Markaa, nadiifinta ruuxiga ah ee dhiiga ciise wuxuu badalay wasakhda dhaqanku. Ciise wuu fuliyay cibaadooyinkaas wuxuuna ku beddelay wax aad u wanaagsan - isaga laftiisa.Markaasaa addoommadii waxay ka buuxiyeen weelasha dusha, sida uu John inoo sheegay aayadda 7aad. Sidee ku habboon; waayo, Ciisena si buu u dhammaystiray cibaadooyinka oo ka dhigay kuwo la dayacay. Markuu jiro da'da Masiixa ma jiro meel loogu talagalay in lagu maydhayo dhaqannada. Addoommadii hadda khamri bay cabbeen oo waxay u geeyeen sayidkii cuntada, kii baa arooskii ku yidhi, Nin kastaa marka hore khamriga wanaagsan ha siiyo, oo hadday sakhraamaan kan yar, adiguse khamriga wanaagsan ilaa haddeer ayaad dib u dhigtay (V. 10).
Maxaad u malaynaysaa inuu John xajistay ereyadan? Ma talo ahaan u siinaysaa makhaayadaha mustaqbalka? Mise waa inuu tuso inuu Ciise sameeyo khamri wanaagsan? Maya, waxaan ula jeedaa macnahooda asturnaan darteed. Yuhuuddu waxay ahaayeen sidii dad muddo dheer khamri ka sheekayn jiray (sameeyey camalkooda dhaqan) si ay u ogaadaan in wax ka wanaagsan ay yimaadeen. Erayadii Maryan: Khamri ma lihid (V. 3) tusin wax kale oo aan ka ahayn in caadooyinka Yuhuuddu aysan mar dambe macno ruuxi ah lahayn. Ciise wuxuu keenay wax cusub oo ka wanaagsan.
Si mawduucan u qoto-dheer, Yooxanaa wuxuu noo sheegayaa sida Ciise uga eryay ganacsatada bannaanka macbudka. Faallooyinka Baybalka waxay ka baxaan bogag su'aalo ah oo ku saabsan in nadiifinta macbudkani ay la mid tahay tan loo nisbeeyay dhamaadka shaqadii Ciise uu ku qabtay dhulka ee ku qoran Injiillada kale, ama in ay jirto hal bilow oo keliya. Sikastaba, Johannes ayaa ka warbixinaya halkaan sababta oo ah macnaha taasi oo calaamad ahaan gadaal u ah.
Mar labaadna Yooxanaa wuxuu taariikh ku xusayaa Yuhuudda: ... Iiddii Kormaridda ee Yuhuuddu waa dhowayd (V. 13). Ciisena wuxuu ku arkay dad macbudka ku iibinaya xoolaha oo ku beddelaya lacag halkaas - xayawaan loo bixiyo allabaryo dhaafid ah dembiyada cafiska iyo lacag loogu isticmaalay bixinta cashuurta macbudka. Ciise karbaash buu sameeyey oo eryay dadkii oo dhan.
Waa wax lala yaabo in hal nin awooday inuu eryo dhammaan ganacsatada. (Aaway booliiskii macbadka markii aad u baahatid iyaga?) Waxaan u maleynayaa in ganacsatada ay ogaayeen inaysan halkan ku jirin iyo inbadan oo dadka caadiga ah aysan rabin halkaan - Ciise wuxuu sameeyay wixii dadku sameeyo si kastaba ha noqotee. durba waan dareemay, oo ganacsadayaashu way ogaayeen inay ka badan yihiin. Josephus wuxuu sharaxayaa iskudayyo kale oo hoggaamiye yaasha Yuhuuddu ku doonayaan inay wax uga beddelaan caadooyinka macbudka; Xaaladaha noocaas ah, waxaa jiray qaylada dadka dhexdooda ah in dadaalladii la joojiyey. Ciise muu lahayn wax diidmo ah dadka ka iibinaya xoolaha inay wax ku bixiyaan ama ku beddelaan lacag loogu talagalay allabariyada macbudka. Wuxuu yiri waxba kama laha khidmadaha sarrifka ee looga baahan yahay tan. Waxa uu cambaareeyay waxay ahayd si fudud meesha loo doortay: waxay ku dhowaayeen inay gurigii Ilaah u beddelaan bakhaar waaxeed (V. 16). Waxay ka sameeyeen ganacsi faa'iido leh rumaysad.
Sidaa darteed hoggaamiyeyaasha diinta Yuhuudda ma aysan xarin Ciise - waxay ogaayeen in dadku ay aqbaleen wixii uu falay - laakiin waxay weyddiiyeen maxaa xaq ku ah inuu sidaas sameeyo (V. 18). Laakiin Ciise uma uu sharraxin sababta ay macbudku u ahayn meesha ugu habboon ee lagu tegi karo, laakiin wuxuu u jeestay waji cusub: jebi macbudkan oo saddex maalmood ayaan doonayaa in la soo sara kiciyo. (V. 19 Zurich Bible). Jesus sprach von seinem eigenen Leib, was die jüdischen Glaubensführer jedoch nicht wussten. Zweifellos hielten sie seine Antwort also für lächerlich, nichtsdestotrotz nahmen sie ihn auch jetzt nicht fest. Jesu Auferstehung zeigt, dass er durchaus befugt war, den Tempel zu reinigen, und seine Worte deuteten bereits auf die bevorstehende Zerstörung desselben hin. Als die jüdischen Glaubensführer Jesus töteten, zerstörten sie damit auch den Tempel; denn der Tod Jesu machte alle zuvor dargebrachten Opfergaben hinfällig. Am dritten Tag darauf ist Jesus auferstanden und erbaute einen neuen Tempel – seine Gemeinde.
Dad badan, Yooxanaa wuxuu inoo sheegayaa, inay rumaysteen Ciise maxaa yeelay waxay arkeen calaamooyinkiisa. Yooxanaa 4,54 wuxuu sheegayaa inay tahay calaamada labaad; Fikradayda, tani waxay horseed u tahay gabagabadii in nadiifinta macbudku ay ahayd mid la soo sheegay si aan nidaamsanayn, maadaama ay daliil u tahay waxa ay Masiixu shaqadiisa runtii ku saabsan tahay. Ciise wuxuu dhammeeyey allabarigii macbudka iyo cibaadadii - iyo madaxdii diinta ee Yuhuuda ayaa waliba si ula kac ah isaga caawiyay iyagoo isku dayaya inay jidh dilaan. Laakiin saddex maalmood gudahood, wax walba oo biyo ah ilaa khamri waa in la beddelaa - caado dhintay waa inay noqotaa rumeeynta ugu dambeysa.